I-Luxe Studio e-Palm Tower Residents Palm Jumeercial - I-Airbnb
I-Luxe Studio e-Palm Tower Residents Palm Jumeercial
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Deluxe Holiday Homes
Leli khaya elithandekayo leholide elisekelwe e-Palm Jumeercial linikeza ukubukeka okungalibaleki komakhelwane bezokunethezeka okufunwa kakhulu kuleli dolobha. Ukubukeka okuhle kwama-fronds nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka yizindawo ezivamile kusuka efasiteleni. Ngokuyinhloko, izindawo zangaphakathi zinezinto ezidingekayo futhi zihambisana nekhishi elithuthukisiwe. Indawo yokuhlala yentsha iphinde ikhuthaze indlela yokuphila ejabulisayo enokufinyelela endaweni yokudlela esophahleni kanye nezindawo zokuzilibazisa, izindawo ezisendaweni, kanye nezindawo eziningi zokuthengisa e-Nak wheel Mall eseduzane.
I-Palm Tower iyisengezo esisha sokunethezeka sezinkanyezi ezinhlanu esinezitezi ezingu-52 zokwakheka okuhle nokuvulekile. Izakhamuzi ze-Palm Tower zizonikezwa ukufinyelela okukhethekile ezindaweni eziningana ezisendaweni kuhlanganise nezindawo zokudlela ze-premium zehhotela, kanye ne-spa enkulu kanye nezindawo zenhlalakahle. Umbhoshongo odumile, ogqugquzelwe ukuma kwesundu, unamasevisi avelele ahlanganisa indawo yokudlela ye-SUSHISAMBA eyaziwa emhlabeni wonke esitezi se-51 kanye ne-The View e-The Palm, indawo yokubuka umphakathi e-
Isitezi esingu-52 esinikeza ukubukwa kwe-panoramic ye-Palm Jumeercial, i-Gulf yase-Arabia, kanye nesibhakabhaka sase-Dubai. Izakhamuzi zizojabulela futhi ukungena ngokuqondile e-Nak wheel Mall, indawo yokuthenga eyingqophamlando, indawo yokudlela kanye nendawo yokuzijabulisa.
Isihlalo✓ sokuphumula ne-Smart TV
Indawo✓ Yokudlela Yekhishi Ehlomele✓ ngokugcwele
Indlu Yokugezela✓ Egcwele
✓ Inefenisha ephelele futhi ihlomele, ilungele ukungena
✓ Wonke amasevisi afakiwe (Ugesi, amanzi, i-Inthanethi Esezingeni Eliphezulu, i-TV ene-Cable Channel,
✓ Ukufinyelela kuzo zonke izakhiwo/izindawo zomphakathi zabahlali ezifana nendawo yokubhukuda neyokuzivocavoca.
✓ Eqenjini lokulungisa indlu – shayela nje ucingo.
I-Palm Jumeercial ingenye yezindawo zikanokusho e-Dubai, nama-marina ayo aqhakazayo ahlanzekile, izindawo zokudlela eziconsisa amathe ze-al fresco, izitolo ezinkulu ezinemikhiqizo edume umhlaba wonke, kanye nezindawo zokuzijabulisa ezimangalisayo. Imiphakathi yayo engumakhelwane yi-Dubai Marina, i-Jumeercial Beach Residents, i-Jumeercial Lakes Towers, ne-Blue Waters Island. Imizuzu embalwa uma ushayela yizindawo ezinkulu zamabhizinisi ezifana ne-Midiya City, i-Inthanethi City, i-International Village,
Ibungazwe ngu-Deluxe Holiday Homes
Singathanda ukuzwa kuwe: Ihhovisi lethu lisebenza izinsuku ezingu-7 ngeviki, izinsuku ezingu-365 ngonyaka.Ithimba lethu lokubhuka liyatholakala ukuze liphendule yonke imibuzo yakho yangaphambi kokubhukha kusukela ngo-9am kuya ku-9pm futhi ithimba lethu losekelo lisebenza ngezikhathi ezinwetshiwe futhi litholakala kusukela ngo-9am kuze kube u-12 phakathi kwamabili ukuze likusize nganoma yiziphi izinkinga ongase ubhekane nazo phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho.
Singathanda ukuzwa kuwe: Ihhovisi lethu lisebenza izinsuku ezingu-7 ngeviki, izinsuku ezingu-365 ngonyaka.Ithimba lethu lokubhuka liyatholakala ukuze liphendule yonke imibuzo yakho…
Izilimi: English, Русский, Tagalog, Українська